TTSweet: ဦးထုပ်ကတော့ ၀ယ်... ဦး... မှာ ....
Posted by T T Sweet at 4:30 PM
ဖိုးတုတ် October 21, 2011 at 4:41 PM
ပို.စ်နဲ.တော့မဆိုင်၊ ဓါတ်ပုံတင်တော့လည်း မန်.ရတာပေါ့
စိတ်ဓါတ်ကျစေမဲ့ စာတကြောင်းတော့ရေးချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမှန်ပြောတာနော်
Don't take dinner (just eat fruit or fruit juice instead of rice). For face: flour 2tsp, plain yogurt 1 tsp, honey 1 tsp, egg white 1 tsp combine all together & apply to face. Keep for 30min then wash away. You can feel smooth immediately. Pls do once or twiceaweek regularly, your face will be brighter.
Mo October 21, 2011 at 6:08 PM
You must buyanew hat :))
I think it is my husband's nature that whenever I am about to enterastore, he will say,"Hey, see only and not to buy anything!" ha ha ha....
မြူးမြူး October 21, 2011 at 6:40 PM
၀ယ်ပစ်လိုက်.. ညီမလဲ ဦးထုပ်ဝယ်မလို့ စိတ်တိုင်းကျတာကိုမရသေးဘူး..း)
တီဆွိ... William မင်္ဂလာဆောင်လုပ်ပါ။ ဘယ်နှယ့် Prince
Henry က မိန်းမမှမရသေးတာ...
T T Sweet October 21, 2011 at 6:57 PM
မှားတဲ့ အခါလဲ မှားပေမပေါ့။ အသက်ကကြီးလာတော့ အဲလိုပဲ မေ့တတ်လာတယ်။ မှားနေရင်ထောက်ပေးကြပါ အရပ်ကတို့။း) ပြင်လိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ အနောနိမတ်စ်ရေ။
မြူးမြူးရေ ... ၀ယ်ဦးမှာ။
Mo all Men are the same in this topic ;)
We, all women are also same in this case too.Hee...Hee.
Thanks for your advice WD. I thought you no longer read my blog. Because I seldom see your comments recently.
Now I am using some skin care product from Korea and there is improvement on my face. Anyway thanks again for your advice.
ကိုဇီ တက်လာတာဟုတ်တာပဲကို။ ခုပြန်ချနေတယ်။ နေ့ခင်းစာလုံးဝမစားပဲချတာ တစ်ကေဂျီပြန်ကျနေပြီ။ ဦးခြိမ့်က အဲလိုချတာ လုံးဝမကြိုက်ဘူးဗျ။ မနေ့က၀မ်းသာအားရ တစ်ကေဂျီကျသွားပြီ၊ ချနေတာဆိုတော့ ဘာမှမစားပဲ သေနေဦးမယ်တဲ့။ ကဲ။
မြသွေးနီ October 21, 2011 at 7:04 PM
အမေနဲ့ သမီးနှစ်ယောက်လုံး ဦးထုတ်လေးတွေနဲ့ လှနေပါလား။ အယ်လီဇဘက်ဘုရင်မကြီးလို့ပြောတာ အားမငယ်နဲ့နော် အစ်မဆွိ။ သူက သက်ရှိထင်ရှား တန်ခိုးထွားနေတုန်းလေ။ မြသွေးတောင် သားအကျ ကက်ပ်ဦးထုတ်လေး သီလရှင်ထွက်တုန်းက ယူဆောင်းရသေးတယ်။ ညက်ခုံးရှုံ့ရှုံ့ကြီးကို ဦးထုတ်လှလှလေးတစ်လုံးလောက် ပူဆာလိုက်လေနော်။
susu October 21, 2011 at 7:23 PM
I'm your fan. I reach your blog everyday (except Sat & Sunday) cos I use PC at work only. No time for blogging at home. :))
သက်ဝေ October 21, 2011 at 8:12 PM
ကိုယ်လည်း ဦးထုပ်တွေတွေ့ရင် သဘောတကျ ကြည့်မိတယ်... ဒါမယ့် မျက်နှာကသေးသေး ဒီကြားထဲ မျက်မှန်က တပ်ရသေး...
ဒီတော့ ဦးထုပ်ဆောင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ လက်လျှော့ထားရတယ်...း(((
သူငယ်ချင်း... ဖဘမှာ Diet Plan ရေးထားတယ်... လာဖတ်လှည့်ပါ...
ဘာမှမစားပဲ ချတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး...း)))
ကိုဇော် October 21, 2011 at 8:50 PM
ဝယ်ပါ . . ဝယ်ပါဗျာ . . .
စိတ်ချမ်းသာဖို့ အဓိက မဟုတ်လား။
အဓိက က ပျော်ဖို့. . . .
NNYM October 21, 2011 at 10:07 PM
တီဆွိ ဦးထုပ်အနက်ရောင်လေးနဲ့ လိုက်တယ် :)
တီဆွိ .. ဦးထုတ်ဝယ်ရင် ဘေးကားကားလေးဝယ် မျက်နှာသေးသွားတယ်ထင်ရတာပေါ. .. သေးသေးနဲ.ဆို မျက်နှာပျဲသွားမယ်ထင်တယ်နော်.. စလုံးမှာတော. မဆောင်းကြဘူးနော် . ဟုတ်ပ.. မိုးကတချိန်လုံးရွာနေတာကို ထီးပဲဆောင်နေရတာ
တီဆွိ blog ဖတ်ရင်း ကျွန်မလဲသမီးလေးကိုသတိရတယ်.
သမီးကလဲ ဂျူးဂျူးလေးအရွယ်ပဲ. ကျွန်မက တနိုင်ငံမှာ သမီးကရန်ကုန်မှာလေ... ဦးထုပ်နဲတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော် :)
တီဆွိက နာမယ်ရေးပါဆိုလို့ နေ့တိုင်းအသစ်တင်တာမျှော်နေတဲလူနော်..
Anonymous October 22, 2011 at 12:20 AM
အို မတ်စိရယ် ဒါမှန်းသိ စလုံးကနေ ဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ၊ ဝယ်သာ ဝယ် ပိုက်ဆံက မသေမချင်း ရှာနေရမှာ :P
အိမ်မက်စေရာ October 22, 2011 at 12:52 AM
တီဆွိကို ဝ တယ်ပြောလို့ အ်ိမ်မက်ကရယ်ချင်လိုက်တာ.. ဂျာမနီက အမျိုးသမီးတွေကို ခေါ်ပြလိုက်ချင်တယ်.. ဗိုက်မှာ အဆီတွေအရစ်ရစ်နဲ့..
ဦးထုပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်သာဝယ် တီဆွိရေ ဒီအချိန်လေးပဲဆောင်းရတာကိုနော့..ဝယ်မယ်ဆို ဘယ်အဝတ်အစားဝတ်ဝတ်လိုက်မယ့် အရောင်ဝယ်.မဟုတ်ရင်ကြည့်ရတာ ဟာသဖြစ်နေမှာ.
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 22, 2011 at 4:34 AM
Princess Beatrice ဦးထုပ်ကြီးကြည့်ပြီး ရယ်ချင်လိုက်တာ
ဒီလိုဆို ဒီဦးထုပ်ဒီဇိုင်က ကမ္ဘာကျော်သွားပုံရတယ်။။
တစ်လုံးလောက် လိုက်ဆောင်းကြည့်မလား စဉ်းစားမိတယ်။။ ဟိဟိ
သူတို့တော်ဝင်ပွဲတွေမှာ အမျိုးသမီးတိုင်း ဦးထုပ်ဆောင်းကြတယ်နော်..
အဲဒီနေ့က ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းကို အစုံတွေ့ရတယ်။။ လှလဲလှကြပါတယ်.
သို့သော် မဆွိတီတို့ သားအမိကို မမီပါလေ
PhyoPhyo October 22, 2011 at 8:18 AM
ဦးထုပ်အနက်လေးနဲ့လှတယ်။ ၀ယ်ပလိုက်ပါ။ ဂျူဂျူးလေးလည်းလှတယ်။
San San Htun October 22, 2011 at 9:31 AM
ဦးထုပ် ဝယ်ပြီးရင်လည်း ပို့ စ်တင်ပါဦးဗျို့ ...
AMK October 22, 2011 at 10:25 AM
ဂျူဂျူ ဦးထုပ် အ၀ါလေးပုံ သိပ်လိုက်တယ် လှတယ်
mstint October 22, 2011 at 4:06 PM
ဗဟုသုတလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ စွိတီရေ။
ရင်ထဲကဆန္ဒကို ဘယ်သူ့အတွက်မှ ထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် လုပ်သာလုပ်ပစ်လိုက် တီတင့်လည်း အဲဒီခံယူချက်ရှိတယ်း)
ကြည်မြန်မာ October 22, 2011 at 10:12 PM
တီဆွိ လှတယ်။ ၀ယ် ၀ယ် ညန် ညန်..။ အနက်ရောင်နဲ့ပုံက ဟော့ရှော့ပဲ ။ မိုက်တယ်..။
rose of sharon October 23, 2011 at 1:45 PM
သားအမိနှစ်ယောက်စလုံးလှကြပါသည်။ ဦးထုပ်အသစ်ဝယ်ဆောင်းပါး)
မယ့်ကိုး October 23, 2011 at 11:58 PM
တစ်နပ်စာလွှတ်တာကို မယ်တော့ ဗိုက်အဆီစုစေတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆို အဲဒီအချိန်မှာလိုမယ့် စွမ်းအင်တွေကို အဆီအဖြစ် ဝမ်းဗိုက်မှာ စုထားတယ်လို့ ဖတ်ဖူးလို့ပါ။
မမသက်ဝေရေးတဲ့ diet လေး ကြိုက်ပါတယ်။
နောက် ထောပတ်သီးဖျော်ရည်ကလည်း အဆီကျစေတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မမ ပြည့်ပြည့်လေးမို့ အမြဲလှနေပါတယ် ...တကယ်ပါး)